မိမိဆိုတဲ့ အမှတျတံဆိပျ (Personal Branding)
ဆရာ ဒေါကျတာသာထှနျးဦး ရေးသားထားတဲ့ "မိမိဆိုတဲ့ အမှတျတံဆိပျ" "Personal Branding" အကွောငျးကို လလေ့ာရအောငျ။
ဒီနခေ့တျေမှာ ကုနျပစ်စညျးတှမှေသာ Brand (အမှတျတံဆိပျ) အရေးကွီးတာမဟုတျတော့ဘဲ လူတဈဦးခငျြးဆီရဲ့ အမှတျတံဆိပျ (Personal Brand) ကလညျး အရေးပါတဲ့ အခနျးကဏ်ဍကို ရောကျရှိလို့လာပါပွီ။ Personal Brand ဆိုတာဘာလဲ၊ ဒီ Brand ကို ဘယျလိုတညျဆောကျကွမလဲ၊ Personal Brand က ဘာကွောငျ့ အရေးပါလာသလဲဆိုတာကို အတူတူ လလေ့ာကွရအောငျ။
ဒီနအေ့ခြိနျအခါမှာ အမှတျတံဆိပျလို့ဆိုရငျ ကုနျပစ်စညျးဝနျဆောငျမှုသာမက လူပုဂ်ဂိုလျတဈဦးခငျြးနဲ့လညျး သကျဆိုငျနပေါတယျ။ ဥပမာဆိုရရငျ နိုငျငံတကာ အားကစားသမားတှမှောဆိုရငျ ဒေးဗဈဘကျခမျး၊ မိုဟာမကျအလီ၊ ဝီလီယံညီအဈမ စသဖွငျ့၊ နိုငျငံတကာစီးပှားရေးသမားတှဆေိုရငျ ဒျေါနယျထရနျ့ပျ၊ ဝါရငျဘူးဖကျ၊ ရဈခဒျြဘရငျဆငျ စသဖွငျ့၊ နိုငျငံတကာ အနုပညာရှငျတှဆေိုရငျ ဂနျြလီနှနျ၊ အဲဗဈပရကျစလေ၊ ABBA ၊ မကျဒေါနား၊ ဂကျြစတငျဘီဘာ စသဖွငျ့ နိုငျငံတကာ နိုငျငံရေးခေါငျးဆောငျတှဆေိုရငျအမှတျတံဆိပျ (Brand) တှပေါပဲ။
ဒါပမေဲ့ ပွောငျးလဲတိုးတကျလာတဲ့ ဒဈဂဈြတယျနညျးပညာနဲ့ ဆိုရှယျမီဒီယာတှကွေောငျ့ အမှတျတံဆိပျတဈခုဟာ ထိလှယျရှလှယျလှနျးလှပါတယျ။ အဲဒါကို သတိပွုပွငျဆငျထားမှသာ မိမိရဲ့ ဂုဏျသိက်ခာနဲ့ နာမညျကောငျးကို ကာကှယျစောငျ့ရှောကျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး အရငျကလို 'မိမိဆိုတဲ့ အမှတျတံဆိပျ' လို့ဆိုရငျ သာမနျကြှနျတျောတို့ ခငျဗြားတို့နဲ့မသကျဆိုငျဘဲ နာမညျကွီးအနုပညာရှငျတှေ နိုငျငံရေးသမားတှနေဲ့ပဲ ဆိုငျတယျဆိုတာ မဟုတျတော့ဘူးလို့ သတိထားဖို့လိုပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ မွနျမာနိုငျငံမှာလညျး နိုငျငံတကာမှာလိုပဲ Facebook ပျေါမှာ မိမိထမငျးစားနတေဲ့ ကုမ်ပဏီမကောငျးကွောငျး၊ ဒါမှမဟုတျ လုပျဖျောကိုငျဖကျ မကောငျးကွောငျးတှကေို သားပုပျလလှေငျ့ ရေးသားမိတဲ့အတှကျ အလုပျထုတျခံရတဲ့ကိစ်စတှေ အမြားအပွားရှိလာပါတယျ။ တဈခု သတိပွုဖို့က ဘာအကွောငျးအရာပဲဖွဈဖွဈ Facebook ပျေါမှာ တငျထားမိရငျ ဘယျအခြိနျ ဘယျနရောကရြငျ ပွနျပျေါလာမလဲဆိုတာ ဘယျသူမှမသိနိုငျတော့ စိတျလိုကျမာနျပါ ဒေါနဲ့မောနဲ့ အငွိုးကွီးစှာ အမုနျးတရားတှနေဲ့ ရေးသားတာမြိုး မှတျခကျြခတြာမြိုးမပွုမိအောငျ လုံးဝသတိပွုဖို့ လိုပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ရဲ့အတှအေ့ကွုံအရဆိုရငျ အခုအခြိနျမှာ မွနျမာကုမ်ပဏီတဈခုအကွောငျးသိခငျြရငျ အခြိနျအကွာကွီးမလိုတော့ဘဲ Website ၊ Facebook ၊ LinkedIn တို့ကနသေိနိုငျသလို နိုငျငံခွားကနေ အလုပျလြောကျသူတှကေလညျး အဲဒီကုမ်ပဏီ၊ ဒါမှမဟုတျ အကွီးအကဲအကွောငျးကို မိနဈအနညျးငယျအတှငျးမှာပဲ Website ၊ Facebook ၊ LinkedIn ၊ Twitter တို့ကနေ တဈဆငျ့ ကွိုတငျလလေ့ာသိရှိထားပွီး အငျတာဗြူးတှမှော ဖွကွေားပွောဆိုလာတာကို သတိပွုဖို့ လိုပါတယျ။ နိုငျငံတကာလလေ့ာသုံးသပျခကျြစဈတမျးမြားအရ ဆုံးဖွတျခကျြခသြူ ၉၈ ရာခိုငျနှုနျးဟာ ကုမ်ပဏီတဈခုနဲ့ ပတျသကျတဲ့ အကွောငျးအရာတှကေို ဆိုရှယျမီဒီယာကနတေဈဆငျ့ လလေ့ာသုံးသပျကွသလို ပစ်စညျးဝယျမယျ့သူ၊ ဒါမှမဟုတျ ကုမ်ပဏီတဈခုရဲ့ဝနျဆောငျမှုကို အသုံးခမြယျ့သူတဈယောကျဟာ Google Search ကနတေဈဆငျ့ ၈၄ ရာခိုငျနှုနျး၊ LinkedIn ကနေ ၆၅ ရာခိုငျနှုနျး၊ Facebook ကနေ ၅၈ ရာခိုငျနှုနျး၊ Twitter ကနေ ၄၈ ရာခိုငျနှုနျးလလေ့ာပွီးမှ ဆုံးဖွတျကွောငျး သိရပါတယျ။
ဒါကွောငျ့လညျး အခုလို ပွိုငျဆိုငျမှုပွငျးထနျလာမယျ့ရှရေ့ေးမှာ 'မိမိ' ရဲ့အမှတျတံဆိပျကို သသေခြောခြာဂရုတစိုကျ ပွုစုပြိုးထောငျစောငျ့ရှောကျနဖေို့ လိုပါတယျ။ ဒီနဆေ့ယျကြျောသကျမှစပွီး လူလတျပိုငျး အရှယျတှအေနနေဲ့ တဈသကျတာလုံး ဒဈဂဈြတယျနဲ့ ဆိုရှယျမီဒီယာကို ဖကျပွီး အသကျရှငျသှားရမှာ ဖွဈတဲ့အတှကျ ပွငျဆငျထားဖို့ လိုပါတယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး BRAND AID စာအုပျထဲမှာပါတဲ့ Seven Steps toaGreat Brand ကို ဝမြှေလိုကျရပါတယျ။
အဆငျ့ ၁ ။ ။ လတျတလော 'မိမိ' ကိုအမြားက မညျသို့တှေးထငျသိမွငျသိရှိထားပါသနညျး။
ရှေးဦးစှာ မိမိကိုယျတိုငျစိတျထငျနားလညျသိရှိထားတဲ့ မိမိရဲ့အားသာခကျြ၊ အားနညျးခကျြ စတာတှကေို ရိုးရိုးသားသားပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး သုံးသပျပွီးခရြေးဖို့ လိုပါတယျ။ ပွီးမှ တခွားမိမိနဲ့သိတဲ့ ရငျးနှီးတဲ့သူတှရေဲ့ ရိုးသားပှငျ့လငျးတဲ့ အမွငျတှကေို မေးပွီးခရြေးပါ။ သတိပွုရမှာကတော့ အမြားစုကကောငျးတာကိုပဲ ဦးစားပေးပွောကွမှာဖွဈပွီး အားနာတတျတဲ့အတှကျ အားနညျးခကျြတှကေိုတော့ရဖို့ခကျခဲပါလိမျ့မယျ။ သိပျရငျးနှီးတဲ့ မိတျဆှတှေကေို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ဝဖေနျဖို့ မတ်ေတာရပျခံကွညျ့ပါ။ တဈခါတလေ မိမိရဲ့လုပျငနျးခှငျထဲက အမညျမဖျောလိုသူအနနေဲ့ ဝဖေနျရငျလညျး အကြိုးရှိပါတယျ။
ဥပမာ – အလုပျကွိုးစားခွငျး၊ စညျးကမျးရှိခွငျး၊ ထကျမွကျခွငျး၊ တညျငွိမျခွငျး၊ ဂရုစိုကျတတျခွငျး၊ ရကျရောစှာလှူဒါနျးခွငျး၊ ပွတျသားခွငျး၊ စှနျ့စားရဲခွငျး၊ ခဉျြးကပျလှယျခွငျး၊ တာဝနျယူတတျခွငျး။
အဆငျ့ ၂ ။ ။ မိမိရှရေ့ေးကို စဉျးစားဆငျခွငျပါ။
မိမိရဲ့ဘဝရညျမှနျးခကျြတှေ အထူးသဖွငျ့ အလုပျအကိုငျ၊ မိသားစု၊ အမှအေနှဈကောငျး အဲဒါတှကေို စဉျးစားပွငျဆငျထားပါ။ ပွီးရငျ အဲဒီဘဝရညျမှနျးခကျြတှေ ဖွညျ့ဆညျးဖို့ ဘယျလိုလုပျဖို့လိုသလဲဆိုတာ ပွငျဆငျထားပါ။ ဖွဈနိုငျရငျအထိရောကျဆုံးနဲ့ အမွနျဆုံးနညျးနဲ့ရောကျနိုငျဖို့ ခရြေးထားပါ။ ကိုယျ့ရဲ့အားသာခကျြ၊ အားနညျးခကျြတှကေိုလညျး ခရြေးထားပါ။ မွငျသာတဲ့ အားနညျးခကျြတှကေို ပွငျဆငျဖို့လိုသလို မိမိရဲ့ရညျမှနျးခကျြကို အစဉျစူးစိုကျလုပျကိုငျနဖေို့လညျးလိုအပျပါတယျ။ တဈခုသတိပွုဖို့က ဘဝရညျမှနျးခကျြတှဟောတိကဖြို့၊ ဖွဈနိုငျခွရှေိဖို့၊ တိတိကကြရြှိဖို့ လိုအပျပါတယျ။ မိမိမြျောမှနျးထားတဲ့ အရညျအခငျြးတှဖွေဈတဲ့ 'အလုပျကွိုးစားသူ၊ အပေါငျးအသငျးမြားသူ၊ နညျးပညာကြှမျးကငျြတတျမွောကျသူ' ဆိုတာတှဟော ယဘေုယကြလြှနျးပွီး အခုခတျေအခွအေနမှော လူတိုငျးမြျောမှနျးထားတာဖွဈနတေဲ့အတှကျ အခွားသူတှနေဲ့ ခွားနားတဲ့အရညျအခငျြးတှကေို စဉျးစားပွငျဆငျထားဖို့ လိုပါတယျ။ အဲဒီလိုပါပဲ။ ကုမ်ပဏီတဈခုရဲ့ အရညျအသှေးတှကေို စဉျးစားပွငျဆငျရာမှာ တဈမူကှဲပွားဖို့လိုပါတယျ။
ဥပမာ – ထကျမွကျခွငျး၊ ပွဿနာဖွရှေငျးနိုငျခွငျး၊ တီထှငျနိုငျစှမျးရှိခွငျး၊ ရိုးသားခွငျး၊ စညျးကမျးသဝေပျခွငျး၊ အသေးစိတျစဉျးစားတတျခွငျး၊ ဦးတညျခကျြရှိခွငျး၊ ရလဒျကိုအခွခေံခွငျး။
အဆငျ့ ၃ ။ ။ အခွအေနနှေဈရပျကို နှိုငျးယှဉျလလေ့ာခွငျး။
အဆငျ့ တဈမှာရှိတဲ့ 'မိမိအမှတျတံဆိပျ' ရဲ့လကျရှိအခွအေနနေဲ့ အဆငျ့ နှဈမှာရှိတဲ့ ဖွဈလိုတဲ့အနာဂတျအခွအေနနှေဈခုကို နှိုငျးယှဉျလလေ့ာဖို့လိုပါတယျ။ အဲဒီလိုလုပျဆောငျခွငျးဟာ ခကျခဲတတျပွီး အဓိကလိုခငျြတာကတော့ မိမိဖွဈခငျြတဲ့ အမှတျတံဆိပျအရညျအခငျြးတှေ ပွညျ့စုံဖို့ ကိုယျပွငျရမယျ့အခကျြတှေ၊ တိုးတကျအောငျလုပျဖို့လိုတဲ့ အားနညျးခကျြတှကေို နှိုငျးယှဉျပွီးလုပျဆောငျခွငျး ဖွဈပါတယျ။
ဥပမာ – အဆငျ့နှဈမှာပဲပါတဲ့အရညျခငျြးတှကေ ပွဿနာဖွရှေငျးတတျခွငျး၊ တီထှငျကွံဆတတျခွငျး၊ ရိုးသားခွငျး၊ အသေးစိတျလုပျကိုငျခွငျး၊ ဦးတညျခကျြရှိခွငျးနဲ့ ရလဒျကိုအခွခေံခွငျး။
အဆငျ့ ၄ ။ ။ 'မိမိ' ဖွဈခငျြတဲ့အမှတျတံဆိပျဖွဈလာဖို့အတှကျ လုပျဆောငျရမယျ့ စီမံကိနျးခမြှတျပွငျဆငျခွငျး။
မိမိဖွဈခငျြတဲ့ အမှတျတံဆိပျဖွဈလာဖို့၊ ဘာလုပျလုပျအဓိပ်ပာယျရှိရှိ တဈသမတျတညျးရှိနဖေို့၊ စနဈတကြ ပွငျဆငျလုပျကိုငျဖို့လိုပါတယျ။
ဥပမာ – တီထှငျကွံဆတတျသူ ဖွဈလာခငျြရငျ အစညျးအဝေးတိုငျးမှာ မိမိရဲ့အကွံအစညျတှကေို အမြားလကျခံနိုငျအောငျ 'ရောငျး' ကွညျ့ဖို့လိုပါတယျ။ အတှေးအချေါ အယူအဆအသဈတှေ ကွုံတှရေ့ရငျလညျး လကျခံနိုငျဖို့ ပွငျဆငျထားပါ။ မိမိအနနေဲ့ အတှေးအချေါအသဈတှကေို အမွဲစဉျးစား၊ ကွံစညျနတေယျဆိုတာ မိမိပတျဝနျးကငျြကို သိရှိပါစေ။
အဆငျ့ ၅ ။ ။ 'မိမိ အမှတျတံဆိပျ'ကို ဂရုစိုကျကာကှယျစောငျ့ရှောကျပါ။
'မိမိ အမှတျတံဆိပျ' နဲ့ပတျသကျတဲ့ မိမိရဲ့ဝတျစားဆငျယငျမှုကအစ နပေုံထိုငျပုံ ပွောဆိုဆကျဆံပုံနဲ့ အသုံးအနှုနျး၊ မိမိရဲ့မိတျဆှပေတျဝနျးကငျြအသိုငျးအဝိုငျး၊ ကနျြးမာရေး၊ Facebook မှာတငျတဲ့အကွောငျးအရာနဲ့ ဓာတျပုံအဆုံး အမွဲဂရုစိုကျနဖေို့လိုပါတယျ။ ဘယျလိုအကွောငျးအရာဖွဈဖွဈ ပွောဆိုရေးသားဆကျသှယျတငျပွရာမှာလညျး အမြားက 'မိမိ' ကို အပွုသဘောဆောငျတဲ့ ကောကျခကျြ၊ မှတျခကျြတှပေေးနိုငျဖို့ သတိထားဖို့လိုပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ Facebook မှာ မတငျခငျ ရရှေညျဘယျလိုအကြိုးသကျရောကျမှု ရှိနိုငျမလဲဆိုတာ အမွဲသတိပွုဖို့ လိုပါတယျ။
ဥပမာ- တီထှငျကွံဆတတျသူတဈယောကျအနနေဲ့ အသိအမှတျပွုခံခငျြရငျ ခေါငျးဆောငျတှေ၊ မနျနဂြောတှနေဲ့ တှကွေုံ့တိုငျး မိမိရဲ့အတှေးအချေါသဈတှကေို တငျပွဆှေးနှေးပါ။ သူတို့ရဲ့အကွံပွုခကျြ၊ ဝဖေနျခကျြတှကေို သခြောလလေ့ာပွီး ပိုမိုကောငျးမှနျပွညျ့စုံအောငျ ပွငျဆငျထားပါ။
အဆငျ့ ၆ ။ ။ 'မိမိ' အမှတျတံဆိပျကို ကာကှယျစောငျ့ရှောကျဖို့ လိုအပျတဲ့အခကျြတှကေို ပွငျဆငျထားပါ။
အဲဒါဟာ အလှနျအရေးပါပွီး သသေခြောခြာ ပွငျဆငျထားမှ 'မိမိ' အမှတျတံဆိပျကို ထိခိုကျမှုနညျးစမှော ဖွဈပါတယျ။ အခုခတျေက လကျကိုငျဖုနျးတိုငျးမှာ ကငျမရာနဲ့ဗီဒီယိုပါတော့ အထူးသဖွငျ့ လူကွားသူကွားမှာ နထေိုငျပွောဆိုပွုမူမှုတှဟော အလှနျပဲဂရုစိုကျဖို့ လိုပါတယျ။
ဥပမာ – တီထှငျကွံဆတတျသူအနနေဲ့ သသေခြောခြာအသေးစိတျ မလလေ့ာထားဘဲနဲ့ အတှေးအချေါအသဈကို ဆှေးနှေးတငျပွတာမြိုးမလုပျဖို့လိုပါတယျ။ ပွငျဆငျမှုအားနညျးပွီး မပွညျ့စုံတဲ့အတှေးအချေါသဈမြိုးဟာ မိမိကိုထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ။
အဆငျ့ ၇ ။ ။ အခြိနျပေးပွီး အမွဲတမျးဆနျးစဈလလေ့ာပါ။
ခွောကျလပွညျ့တိုငျး အပျေါကဖျောပွထားတဲ့ အဆငျ့တဈကနေ ခွောကျကို ပွနျဆနျးစဈလလေ့ာဖို့ လိုအပျပါတယျ။ အပွောငျးအလဲမွနျတဲ့ ယနခေ့တျေအခြိနျအခါနဲ့ နညျးပညာရဲ့အကြိုးဆကျကွောငျ့ အမှတျတံဆိပျတှဟော အပွောငျးအလဲ၊ အတိုးအဆုတျတှေ ဖွဈနိုငျဖှယျရှိနပေါတယျ။ အဓိကသတိထားရမယျ့အခကျြက အခြိနျပွောငျးလဲလာတာနဲ့အမြ မိမိအမှတျတံဆိပျရဲ့ နဂိုမူလ ရညျမှနျးခကျြတှနေဲ့ သှဖေညျမှုရှိမရှိ အမွဲဆနျးစဈနဖေို့ပဲဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ဒီနေ့ နိုငျငံရေးပုံစံပွောငျးလဲသှားတာနဲ့အမြှ ရရှိလာမယျ့အခှငျ့အရေးတှေ၊ စိနျချေါမှုတှအေတှကျ မိမိ၊ ဒါမှမဟုတျ ကုမ်ပဏီအဖှဲ့အစညျးအတှကျ အမှတျတံဆိပျကောငျးတဈခုအနနေဲ့ စနဈတကပြွငျဆငျထားဖို့လိုပါကွောငျး . . .
ဆရာ ဒေါက်တာသာထွန်းဦး ရေးသားထားတဲ့ "မိမိဆိုတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်" "Personal Branding" အကြောင်းကို လေ့လာရအောင်။
ဒီနေ့ခေတ်မှာ ကုန်ပစ္စည်းတွေမှသာ Brand (အမှတ်တံဆိပ်) အရေးကြီးတာမဟုတ်တော့ဘဲ လူတစ်ဦးချင်းဆီရဲ့ အမှတ်တံဆိပ် (Personal Brand) ကလည်း အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို ရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။ Personal Brand ဆိုတာဘာလဲ၊ ဒီ Brand ကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်ကြမလဲ၊ Persoanl Brand က ဘာကြောင့် အရေးပါလာသလဲဆိုတာကို အတူတူ လေ့လာကြရအောင်။
ဒီနေ့အချိန်အခါမှာ အမှတ်တံဆိပ်လို့ဆိုရင် ကုန်ပစ္စည်းဝန်ဆောင်မှုသာမက လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းနဲ့လည်း သက်ဆိုင်နေပါတယ်။ ဥပမာဆိုရရင် နိုင်ငံတကာ အားကစားသမားတွေမှာဆိုရင် ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်း၊ မိုဟာမက်အလီ၊ ဝီလီယံညီအစ်မ စသဖြင့်၊ နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးသမားတွေဆိုရင် ဒေါ်နယ်ထရန့်ပ်၊ ဝါရင်ဘူးဖက်၊ ရစ်ချဒ်ဘရင်ဆင် စသဖြင့်၊ နိုင်ငံတကာ အနုပညာရှင်တွေဆိုရင် ဂျန်လီနွန်၊ အဲဗစ်ပရက်စလေ၊ ABBA ၊ မက်ဒေါနား၊ ဂျက်စတင်ဘီဘာ စသဖြင့် နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေဆိုရင်အမှတ်တံဆိပ် (Brand) တွေပါပဲ။
ဒါပေမဲ့ ပြောင်းလဲတိုးတက်လာတဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာနဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကြောင့် အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဟာ ထိလွယ်ရှလွယ်လွန်းလှပါတယ်။ အဲဒါကို သတိပြုပြင်ဆင်ထားမှသာ မိမိရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ နာမည်ကောင်းကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အရင်ကလို 'မိမိဆိုတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်' လို့ဆိုရင် သာမန်ကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားတို့နဲ့မသက်ဆိုင်ဘဲ နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တွေ နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ပဲ ဆိုင်တယ်ဆိုတာ မဟုတ်တော့ဘူးလို့ သတိထားဖို့လိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း နိုင်ငံတကာမှာလိုပဲ Facebook ပေါ်မှာ မိမိထမင်းစားနေတဲ့ ကုမ္ပဏီမကောင်းကြောင်း၊ ဒါမှမဟုတ် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် မကောင်းကြောင်းတွေကို သားပုပ်လေလွင့် ရေးသားမိတဲ့အတွက် အလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေ အများအပြားရှိလာပါတယ်။ တစ်ခု သတိပြုဖို့က ဘာအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ် Facebook ပေါ်မှာ တင်ထားမိရင် ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာကျရင် ပြန်ပေါ်လာမလဲဆိုတာ ဘယ်သူမှမသိနိုင်တော့ စိတ်လိုက်မာန်ပါ ဒေါနဲ့မောနဲ့ အငြိုးကြီးစွာ အမုန်းတရားတွေနဲ့ ရေးသားတာမျိုး မှတ်ချက်ချတာမျိုးမပြုမိအောင် လုံးဝသတိပြုဖို့ လိုပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံအရဆိုရင် အခုအချိန်မှာ မြန်မာကုမ္ပဏီတစ်ခုအကြောင်းသိချင်ရင် အချိန်အကြာကြီးမလိုတော့ဘဲ Website ၊ Facebook ၊ LinkedIn တို့ကနေသိနိုင်သလို နိုင်ငံခြားကနေ အလုပ်လျောက်သူတွေကလည်း အဲဒီကုမ္ပဏီ၊ ဒါမှမဟုတ် အကြီးအကဲအကြောင်းကို မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ Website ၊ Facebook ၊ LinkedIn ၊ Twitter တို့ကနေ တစ်ဆင့် ကြိုတင်လေ့လာသိရှိထားပြီး အင်တာဗျူးတွေမှာ ဖြေကြားပြောဆိုလာတာကို သတိပြုဖို့ လိုပါတယ်။ နိုင်ငံတကာလေ့လာသုံးသပ်ချက်စစ်တမ်းများအရ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူ ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းဟာ ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဆိုရှယ်မီဒီယာကနေတစ်ဆင့် လေ့လာသုံးသပ်ကြသလို ပစ္စည်းဝယ်မယ့်သူ၊ ဒါမှမဟုတ် ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးချမယ့်သူတစ်ယောက်ဟာ Google Search ကနေတစ်ဆင့် ၈၄ ရာခိုင်နှုန်း၊ LinkedIn ကနေ ၆၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ Facebook ကနေ ၅၈ ရာခိုင်နှုန်း၊ Twitter ကနေ ၄၈ ရာခိုင်နှုန်းလေ့လာပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း အခုလို ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်လာမယ့်ရှေ့ရေးမှာ 'မိမိ' ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကို သေသေချာချာဂရုတစိုက် ပြုစုပျိုးထောင်စောင့်ရှောက်နေဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီနေ့ဆယ်ကျော်သက်မှစပြီး လူလတ်ပိုင်း အရွယ်တွေအနေနဲ့ တစ်သက်တာလုံး ဒစ်ဂျစ်တယ်နဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာကို ဖက်ပြီး အသက်ရှင်သွားရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း BRAND AID စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ Seven Steps toaGreat Brand ကို ဝေမျှလိုက်ရပါတယ်။
အဆင့် ၁ ။ ။ လတ်တလော 'မိမိ' ကိုအများက မည်သို့တွေးထင်သိမြင်သိရှိထားပါသနည်း။
ရှေးဦးစွာ မိမိကိုယ်တိုင်စိတ်ထင်နားလည်သိရှိထားတဲ့ မိမိရဲ့အားသာချက်၊ အားနည်းချက် စတာတွေကို ရိုးရိုးသားသားပွင့်ပွင့်လင်းလင်း သုံးသပ်ပြီးချရေးဖို့ လိုပါတယ်။ ပြီးမှ တခြားမိမိနဲ့သိတဲ့ ရင်းနှီးတဲ့သူတွေရဲ့ ရိုးသားပွင့်လင်းတဲ့ အမြင်တွေကို မေးပြီးချရေးပါ။ သတိပြုရမှာကတော့ အများစုကကောင်းတာကိုပဲ ဦးစားပေးပြောကြမှာဖြစ်ပြီး အားနာတတ်တဲ့အတွက် အားနည်းချက်တွေကိုတော့ရဖို့ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ သိပ်ရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝေဖန်ဖို့ မေတ္တာရပ်ခံကြည့်ပါ။ တစ်ခါတလေ မိမိရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲက အမည်မဖော်လိုသူအနေနဲ့ ဝေဖန်ရင်လည်း အကျိုးရှိပါတယ်။
ဥပမာ – အလုပ်ကြိုးစားခြင်း၊ စည်းကမ်းရှိခြင်း၊ ထက်မြက်ခြင်း၊ တည်ငြိမ်ခြင်း၊ ဂရုစိုက်တတ်ခြင်း၊ ရက်ရောစွာလှူဒါန်းခြင်း၊ ပြတ်သားခြင်း၊ စွန့်စားရဲခြင်း၊ ချဉ်းကပ်လွယ်ခြင်း၊ တာဝန်ယူတတ်ခြင်း။
အဆင့် ၂ ။ ။ မိမိရှေ့ရေးကို စဉ်းစားဆင်ခြင်ပါ။
မိမိရဲ့ဘဝရည်မှန်းချက်တွေ အထူးသဖြင့် အလုပ်အကိုင်၊ မိသားစု၊ အမွေအနှစ်ကောင်း အဲဒါတွေကို စဉ်းစားပြင်ဆင်ထားပါ။ ပြီးရင် အဲဒီဘဝရည်မှန်းချက်တွေ ဖြည့်ဆည်းဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ဖို့လိုသလဲဆိုတာ ပြင်ဆင်ထားပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင်အထိရောက်ဆုံးနဲ့ အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ရောက်နိုင်ဖို့ ချရေးထားပါ။ ကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေကိုလည်း ချရေးထားပါ။ မြင်သာတဲ့ အားနည်းချက်တွေကို ပြင်ဆင်ဖို့လိုသလို မိမိရဲ့ရည်မှန်းချက်ကို အစဉ်စူးစိုက်လုပ်ကိုင်နေဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ခုသတိပြုဖို့က ဘဝရည်မှန်းချက်တွေဟာတိကျဖို့၊ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိဖို့၊ တိတိကျကျရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မိမိမျော်မှန်းထားတဲ့ အရည်အချင်းတွေဖြစ်တဲ့ 'အလုပ်ကြိုးစားသူ၊ အပေါင်းအသင်းများသူ၊ နည်းပညာကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်သူ' ဆိုတာတွေဟာ ယေဘုယျကျလွန်းပြီး အခုခေတ်အခြေအနေမှာ လူတိုင်းမျော်မှန်းထားတာဖြစ်နေတဲ့အတွက် အခြားသူတွေနဲ့ ခြားနားတဲ့အရည်အချင်းတွေကို စဉ်းစားပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ အဲဒီလိုပါပဲ။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ အရည်အသွေးတွေကို စဉ်းစားပြင်ဆင်ရာမှာ တစ်မူကွဲပြားဖို့လိုပါတယ်။
ဥပမာ – ထက်မြက်ခြင်း၊ ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း၊ တီထွင်နိုင်စွမ်းရှိခြင်း၊ ရိုးသားခြင်း၊ စည်းကမ်းသေဝပ်ခြင်း၊ အသေးစိတ်စဉ်းစားတတ်ခြင်း၊ ဦးတည်ချက်ရှိခြင်း၊ ရလဒ်ကိုအခြေခံခြင်း။
အဆင့် ၃ ။ ။ အခြေအနေနှစ်ရပ်ကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း။
အဆင့် တစ်မှာရှိတဲ့ 'မိမိအမှတ်တံဆိပ်' ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ အဆင့် နှစ်မှာရှိတဲ့ ဖြစ်လိုတဲ့အနာဂတ်အခြေအနေနှစ်ခုကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ဆောင်ခြင်းဟာ ခက်ခဲတတ်ပြီး အဓိကလိုချင်တာကတော့ မိမိဖြစ်ချင်တဲ့ အမှတ်တံဆိပ်အရည်အချင်းတွေ ပြည့်စုံဖို့ ကိုယ်ပြင်ရမယ့်အချက်တွေ၊ တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့လိုတဲ့ အားနည်းချက်တွေကို နှိုင်းယှဉ်ပြီးလုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ – အဆင့်နှစ်မှာပဲပါတဲ့အရည်ချင်းတွေက ပြဿနာဖြေရှင်းတတ်ခြင်း၊ တီထွင်ကြံဆတတ်ခြင်း၊ ရိုးသားခြင်း၊ အသေးစိတ်လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ ဦးတည်ချက်ရှိခြင်းနဲ့ ရလဒ်ကိုအခြေခံခြင်း။
အဆင့် ၄ ။ ။ 'မိမိ' ဖြစ်ချင်တဲ့အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်လာဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်ရမယ့် စီမံကိန်းချမှတ်ပြင်ဆင်ခြင်း။
မိမိဖြစ်ချင်တဲ့ အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်လာဖို့၊ ဘာလုပ်လုပ်အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိ တစ်သမတ်တည်းရှိနေဖို့၊ စနစ်တကျ ပြင်ဆင်လုပ်ကိုင်ဖို့လိုပါတယ်။
ဥပမာ – တီထွင်ကြံဆတတ်သူ ဖြစ်လာချင်ရင် အစည်းအဝေးတိုင်းမှာ မိမိရဲ့အကြံအစည်တွေကို အများလက်ခံနိုင်အောင် 'ရောင်း' ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ အတွေးအခေါ် အယူအဆအသစ်တွေ ကြုံတွေ့ရရင်လည်း လက်ခံနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားပါ။ မိမိအနေနဲ့ အတွေးအခေါ်အသစ်တွေကို အမြဲစဉ်းစား၊ ကြံစည်နေတယ်ဆိုတာ မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကို သိရှိပါစေ။
အဆင့် ၅ ။ ။ 'မိမိ အမှတ်တံဆိပ်'ကို ဂရုစိုက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါ။
'မိမိ အမှတ်တံဆိပ်' နဲ့ပတ်သက်တဲ့ မိမိရဲ့ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကအစ နေပုံထိုင်ပုံ ပြောဆိုဆက်ဆံပုံနဲ့ အသုံးအနှုန်း၊ မိမိရဲ့မိတ်ဆွေပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်း၊ ကျန်းမာရေး၊ Facebook မှာတင်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ ဓာတ်ပုံအဆုံး အမြဲဂရုစိုက်နေဖို့လိုပါတယ်။ ဘယ်လိုအကြောင်းအရာဖြစ်ဖြစ် ပြောဆိုရေးသားဆက်သွယ်တင်ပြရာမှာလည်း အများက 'မိမိ' ကို အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ကောက်ချက်၊ မှတ်ချက်တွေပေးနိုင်ဖို့ သတိထားဖို့လိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Facebook မှာ မတင်ခင် ရေရှည်ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိနိုင်မလဲဆိုတာ အမြဲသတိပြုဖို့ လိုပါတယ်။
ဥပမာ- တီထွင်ကြံဆတတ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ အသိအမှတ်ပြုခံချင်ရင် ခေါင်းဆောင်တွေ၊ မန်နေဂျာတွေနဲ့ တွေ့ကြုံတိုင်း မိမိရဲ့အတွေးအခေါ်သစ်တွေကို တင်ပြဆွေးနွေးပါ။ သူတို့ရဲ့အကြံပြုချက်၊ ဝေဖန်ချက်တွေကို သေချာလေ့လာပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်ပြည့်စုံအောင် ပြင်ဆင်ထားပါ။
အဆင့် ၆ ။ ။ 'မိမိ' အမှတ်တံဆိပ်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အချက်တွေကို ပြင်ဆင်ထားပါ။
အဲဒါဟာ အလွန်အရေးပါပြီး သေသေချာချာ ပြင်ဆင်ထားမှ 'မိမိ' အမှတ်တံဆိပ်ကို ထိခိုက်မှုနည်းစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုခေတ်က လက်ကိုင်ဖုန်းတိုင်းမှာ ကင်မရာနဲ့ဗီဒီယိုပါတော့ အထူးသဖြင့် လူကြားသူကြားမှာ နေထိုင်ပြောဆိုပြုမူမှုတွေဟာ အလွန်ပဲဂရုစိုက်ဖို့ လိုပါတယ်။
ဥပမာ – တီထွင်ကြံဆတတ်သူအနေနဲ့ သေသေချာချာအသေးစိတ် မလေ့လာထားဘဲနဲ့ အတွေးအခေါ်အသစ်ကို ဆွေးနွေးတင်ပြတာမျိုးမလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ပြင်ဆင်မှုအားနည်းပြီး မပြည့်စုံတဲ့အတွေးအခေါ်သစ်မျိုးဟာ မိမိကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
အဆင့် ၇ ။ ။ အချိန်ပေးပြီး အမြဲတမ်းဆန်းစစ်လေ့လာပါ။
ခြောက်လပြည့်တိုင်း အပေါ်ကဖော်ပြထားတဲ့ အဆင့်တစ်ကနေ ခြောက်ကို ပြန်ဆန်းစစ်လေ့လာဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အပြောင်းအလဲမြန်တဲ့ ယနေ့ခေတ်အချိန်အခါနဲ့ နည်းပညာရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့် အမှတ်တံဆိပ်တွေဟာ အပြောင်းအလဲ၊ အတိုးအဆုတ်တွေ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိနေပါတယ်။ အဓိကသတိထားရမယ့်အချက်က အချိန်ပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျ မိမိအမှတ်တံဆိပ်ရဲ့ နဂိုမူလ ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ သွေဖည်မှုရှိမရှိ အမြဲဆန်းစစ်နေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီနေ့ နိုင်ငံရေးပုံစံပြောင်းလဲသွားတာနဲ့အမျှ ရရှိလာမယ့်အခွင့်အရေးတွေ၊ စိန်ခေါ်မှုတွေအတွက် မိမိ၊ ဒါမှမဟုတ် ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းအတွက် အမှတ်တံဆိပ်ကောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ စနစ်တကျပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါကြောင်း . . .
Read times Last modified on Tuesday, 06 July 2021 09:49